Hehy · Febroary, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Hehy · Febroary, 2009
Tantara mikasika ny Hehy tamin'ny Febroary, 2009
Shina 22 Febroary 2009
Arabia Saodita 15 Febroary 2009
Rosia: Andro iray ho fihetsehana
Japana 05 Febroary 2009
Nibaliaka ny masoandro teto Mosko ny andron'ny 31 janoary, ambanin'ny 14° Celsius/7° Fahrenheit teo ho eo ny maripàna, nefa na teo aza ny hatsiaka, nahitàna fihetsehana maromaro ho fanoherana ny governemanta ny tanàna – ary fifanjevoana vitsivitsy. Ireto manaraka ireto misy fitantaràna fohy, sary, ampahan-tsary miaina, ary rohy vitsivitsy. LJ...
Japana: Tanora Masina, Jesoa sy Boddha nidina an-tany
Japana 02 Febroary 2009
Ahoana moa raha midina ety an-tany i Jesoa sy i Boddha mba hitsangatsangana faran'ny herinandro? ary ahoana moa raha miara-mipetraka amina efitrano mora vidy any Tachikawa andrefan'i Tokyo izy ireo? izany no eritreretin'i Hikaru Nakamura (中村光) [jp], tanora Japoney mpanoratra manga, raha miaraka amin'ireo Oniisan Masina (聖☆おにいさん [jp], dika mivantana...